PowerMe dia mamela anao hameno ny iPhone amin'ny Android | Vaovao IPhone
Araka ny efa fantatrareo, ny Apple Pencil, ny Apple stylus voalohany natao hampiasaina amin'ny iPad Pro, dia mety ho fiampangana amin'ny fampifandraisana azy amin'ny seranan-jiro amin'ny iPad 12.9-inch. Apple dia manome antoka fa handoa vola amin'ny fanatontosana 30m misy 15s fotsiny mifandray amin'io fomba io. Tsy antenaintsika fa haharitra izany, fa tsy aleo ve afaka manao toy izany amin'ny iPhone? Teraka tamin'io hevitra io PowerMe, tetikasa Indiegogo izay mitady famatsiam-bola hahafahana mandeha eny an-tsena.
PowerMe dia rafitra tena tsotra: tariby izay mifandray amin'ny iPhone amin'ny fitaovana Android (tsy mifanaraka amin'ny iOS ka hatramin'ny iOS) na fitaovana hafa misy a seranan-tsambo micro-USB ho an'ny faharoa hamindra angovo ho voalohany. Mampalahelo fa tsy mampiditra fanohanana avy amin'ny Tselatra mankany amin'ny Tselatra izany fa afaka manampy antsika raha manana takelaka hafa isika, toy ny Samsung Galaxy Tab na Nexus 7. https://youtu.be/7L8KrKk-m44
Araka ny efa nolazaiko, PowerMe dia mitady famatsiam-bola havoaka, fa raha tena liana ianao dia tsy ilaina ny mandoa vola be toy ny amin'ireo tetikasa hafa amin'ity karazana ity. Io dia mety ho Reserve a PowerMe amin'ny $ 9 fotsiny, vidiny ambany dia ambany tokoa raha raisintsika ho ohatrinona ny karazana tariby izay manana fampiasa izay manome azy ny exclusivity (lazao anay mpampiasa Apple). Raha mitahiry izany ianao dia hahazo ny PowerMe anao amin'ny volana Janoary. Hatao fotsy, volondavenona, maintso, manga, mena ary voasary izy ireo.
Raha tsy misy 44 andro mandra-pahatapitry ny fotoana famatsiam-bola ho an'ny tetikasa, PowerMe dia nahazo mihoatra ny 30% ny vola ilain'izy ireo, izay mihoatra ny € 3.000 amin'ny 10.000 €. Toa tsy manana gadona izy io ka mahatonga azy ireo hanana fanantenana, noho izany, raha liana ianao dia aleo tahiry alohan'ny handaozanao ny PowerMe anao. Manana fampahalalana bebe kokoa ianao ao amin'ny pejy ofisialin'ny tetikasa amin'ny Indiegogo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » PowerMe dia mamela anao hameno ny iPhone amin'ny fitaovana Android
Hanova ny iPhone ho lasa lech
Azonao atao koa ny mizara an'ity: http://miniimg.rightinthebox.com/images/384×384/201301/amccdv1359337328704.jpg Ary miaraka amin'ny tariby iPhone iray ihany dia mitovy ny asany, nohamariniko, ary raha manana tariby Android ianao dia hanompo anao koa, arahaba!
YaTeVale dia hoy izy:
Onajano oysters, novolavolainareo ny dokam-barotra momba ny vokatra! TPT.
Valio amin'i YaTeVale